अस्तुरा र कैंचीमा गर्व गर्ने वडा अध्यक्ष मागीलाल - News Today
अस्तुरा र कैंचीमा गर्व गर्ने वडा अध्यक्ष मागीलाल
Date: ३१ बैशाख २०७५, सोमबार २०:५३
राजविराज, ३१ वैशाख । आफ्नै मेहनत र पसिनामा गर्व गर्छन् सप्तरीको राजविराज नगरपालिका वडा नम्वर–७ का अध्यक्ष मागीलाल नाई । जनताको काम बाहेकको समयमा उनी नियमित रुपमा आफ्नै सैलुनमा अस्तुरा (दाह्री काट्ने औजार) र कैंची चलाएर पाएको आम्दानीबाट ७ जनाको परिवार पाल्दैआएका छन् । अचेल वडा कार्यालयमा अत्यधिक कामको लोड रहेकोले उनी विहान ६.३० बजेदेखि ९.३० बजेसम्म तथा साँझ ५ बजेखि राती ९ बजेसम्म सैलुनमा ग्राहकहरुको दाह्री बनाउन र कपाल काट्नमा व्यस्त हुन्छन् ।
२०४९ सालदेखि निरन्तर रुपमा वडा अध्यक्षमा चुनाव जित्दैआएका मागीलाल २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा समेत अत्यधिक मतले पुनः विजयी भएर जनताको सेवामा जुटेका छन् । जनताका बीच लोकप्रिय जनप्रतिनिधीको रुपमा चिनिएका उनी २०२९ सालमा एसएलसी दिएर क्याम्पसमा नाम त लेखाए तर घरको आर्थिक अवस्थाका कारण अगाडि पढ्न सकेन ।
केही समय काठमाण्डौमा रहेर कपाल काट्न सिकेका मागीलालले २०३२ सालदेखि राजविराजको हटियामा हिमालय हेयर कटिङ्ग सैलुन खोलेर हालसम्म सञ्चालन गर्दैआएका छन् । आफै सञ्चालक तथा आफै कामदारको रुपमा रहेका उनी कपाल काटेर आएको आम्दानीबाट ७ जनाको परिवार पाल्दैआएका छन् । नयाँ संरचनामा साबिकको वडा नम्वर–१ र ६ मिलाएर हाल वडा नम्वर ७ भएको कार्यक्षेत्र र कामको दायरा समेत बढेको बताउँदै ६३ वर्षिय वडा अध्यक्ष मागीलाल भन्छन् ‘भ्याएसम्म जनताको पीर–मर्का बुझ्ने गर्छु, अहिलेसम्म इमान्दारीपूर्वक जिम्मेवारी वहन गर्दैआएको छु ।’
जनताले विश्वास गरेर मत दिएकोले आफु समेत ज्यानले भ्याएसम्म सेवामा जुटेको उनले बताए । नगरपालिकाको मुख्य बजार क्षेत्र समेत वडा नम्वर ७ मै परेकोले अहिले उनीमाथि बजार व्यवस्थापनको जिम्मेवारी समेत थपिएको छ । मुख्य व्यापारिक केन्द्र मानिएको हटियामा करिब २२ करोडको लागतमा सुविधायुक्त सपिङ्ग कम्पलेक्स निर्माण हुन लागेको छ । त्यस अघि हटिया खाली गराएर ठेकेदारलाई काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु ठूलो चुनौती रहेको उनले बताए ।
उनका अनुसार तरकारी हाट, माछा हाट र खसी बोका हाट खाली गराईसकेको, श्रृङ्गार लाइन, चिउरा मुरही लाइन समेत जेठ २ गते खाली गराई अफिसर्स क्लवमा व्यवस्थापन गर्न लागिएको छ । यस अतिरिक्त नगरपलिकाबाट पाएको विकासीय बजेटबाट नाला निर्माण, ग्राभेल, पिसीसी, चौतारा निर्माण लगायतका कामहरु अगाडि बढाउन लागिएको उनले जानकारी दिए । हटिया खाली गराउनुपर्दा दुःख लागेको बताउँदै वडा अध्यक्ष मागीलालले भने ‘३०८ कोठे सपिङ्ग कम्पलेक्सको सम्पूर्ण निर्माण कार्य डेढ वर्षभित्र सकाएर हटियाका व्यापारी व्यवसायीहरुलाई व्यवस्थापन गर्नेछौं, नयाँ संरचना व्यवस्थित भईसकेपछि सुन्दर एवम् आकर्षक देखिनेछन् ।’
आफुलाई सरकारी पैसामा लोभ नरहेको बताउँदै उनले भने ‘वडा अध्यक्षमा जितेपछि अहिलेसम्म कुनै पारिश्रमिक पाएको छैन, पदमा रहे वा नरहे मलाई कुनै फरक पर्दैन, अस्तुरा र कैंची छँदैछ ।’ राम्रो गरेर देखाउने संकल्पका साथ काम गरिरहेकै कारणले वडावासीको साथ आफुले पाएको उनले बताए ।
हटिया क्षेत्रमा अझैं नियमित सरसफाई हुन नसकिरहेको जनताको गुनासो छ नि ? भने जिज्ञासामा उनले नगरपालिकामा सरसफाई कर्मचारीको अभाव रहेको तथा ६ ओटा ट्रयाक्टरमध्ये २ ओटा बिग्रिएकोले हाल नियमित सरसफाईमा समस्या देखिएको स्वीकार गरे । उक्त समस्या समाधानकालागि समेत आफुले पहल थालिसकेको भन्दै चाँडै समाधान हुने प्रतिवद्धता मागीलालले गरे ।
Previous : निर्णायक तहमा छैन मधेशी महिलाको पहुँचः उपाध्यक्ष यादव
Next : सरकार ! औद्योगिक क्षेत्र हो कि खुला गौचरण ?